समाचार - आउटडोर एलईडी संकेतहरूको पावर
अनुसन्धानले संकेत गर्दछ कि आउटडोर एलईडी साइनेजले ग्राहक वा तपाईंको व्यवसायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने सम्भावित ग्राहकको निर्णयमा मुख्य भूमिका खेल्दछ।
करीव।3उपभोक्ताहरूको% केवल उनीहरूले पसल वा व्यवसायमा प्रवेश गरेका छन् उनीहरूले पहिले साइन इन गरेका थिएनन केवल यसको संकेतको आधारमा।
तपाईंको आउटडोर साइन अक्सर ग्राहकको साथ तपाईंको पहिलो टच पोइन्ट हुन्छ, त्यसैले किन यो स्पष्ट र आकर्षक संकेत सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ जुन ग्राहकलाई आकर्षित गर्दछ र उनीहरूले भित्रबाट पाएको अनुभव प्रतिबिम्बित गर्दछ।
करीव।5% उपभोक्ताहरू विश्वास गर्छन् कि व्यवसायको संकेतले यसको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको गुणस्तर झल्काउँछ, र सर्वेक्षणकर्ताहरूले %०% भन्दा बढीले संकेत गरे कि खराब हस्ताक्षरले उनीहरूलाई व्यवसायको स्थानमा प्रवेश गर्नबाट पनि रोक्छ।
जबकि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको व्यवसायको लागि बाहिरी साइन हुनु हो, यो लगभग समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छ कि साइनेज डिजाइन र गुणवत्ता सम्मानित देखिन्छ। यो अनुसन्धानले प्रतिबिम्बित गरेझैं अव्यवसायिक साइनेजले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईंको व्यवसायलाई विश्वास गर्नबाट रोक्दछ। तपाईको आउटडोर व्यवसायका संकेतहरू सकेसम्म धेरै यातायात चलाइरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न, सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईंको सन्देश सही र सम्मोहक हो भनेर पुष्टि गर्नु हो। यदि तपाईंको चिन्हले केही पहिरो र अश्रु देखाउँदै छ भने, तपाईं नयाँमा लगानी गर्ने बारे पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको आउटडोर संकेतहरूको हाम्रो चयन जाँच गर्नुहोस् तपाईंको व्यवसाय र तपाईंको बजेटको लागि सही संकेत फेला पार्न।
लगभग 59% उपभोक्ताहरूले भने कि साइनको अभावले उनीहरूलाई स्टोर वा व्यवसायमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ।
हुनसक्छ तपाईंले भर्खर आफ्नो सानो व्यवसाय सुरू गर्नु भएको छ र तपाईंको प्लेटमा धेरै नै छ। वा सायद तपाई यस्तो सोचाइमा हुनुहुन्छ कि आउटडोर साइनेज सार्थक लगानी होइन। जेसुकै होस्, यो तथ्याistic्क बाहिरी संकेतहरूलाई प्राथमिकता दिन कत्तिको महत्त्वपूर्ण हो भनेर दोहोर्‍याउँछ। एक बिना, तपाईं सम्भावित व्यवसाय गुमाइरहनुभएको छ र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको व्यवसाय कुनै प्रकारले विश्वासयोग्य छैन। तपाईंको व्यवसायको लागि सही आउटडोर साइन कसरी छनौट गर्ने भन्नेद्वारा अभिभूत? आफैलाई यी questions प्रश्नहरू सोध्नुहोस् तपाईंको खरीदको लागि यो निश्चित गर्नका लागि तपाईंले सही छनौट गर्नुभयो।
लगभग आधा, 50.7%, अमेरिकी उपभोक्ताहरूले अपर्याप्त साइनेजको कारण फेला नपरेसम्म वांछित व्यवसायले चालित गरेका छन्।
तपाइँले बेच्ने उत्पादनहरू वा तपाइँले प्रदान गर्नुभएको सेवाको प्रकारको खोजीमा रहेकोको मौका उच्च छ, तर साइन बिना, तीनिहरूले तपाईंलाई कसरी फेला पार्नेछन्? तपाईंको व्यवसायको लागि एक विशिष्ट, उच्च-गुणवत्ता आउटडोर साइन सिर्जना गर्नाले तपाईंलाई ग्राहकहरूको लागि न केवल तपाईंको स्थान पुष्टि गर्न सक्दछ, तर साथै ब्रान्ड सचेतना पनि निर्माण गर्दछ। त्यस मार्ग, अर्को पटक ग्राहकलाई तपाइँको उत्पादन र सेवाहरूको आवश्यकता छ, तिनीहरूले तपाइँको व्यवसाय सम्झना गर्नेछन् र कहाँ जान्छन् थाहा पाउनेछन्।
साइन पठनीयता उपभोक्ताहरु को स्टोर को उत्पादन वा सेवा को कोशिश गर्न को लागी सबैभन्दा महत्वपूर्ण संकेत कारक हो।
तपाईका सम्भावित ग्राहकहरू व्यस्त छन्। उल्लेख गर्न को लागी तिनीहरू सम्भवतः दैनिक आधारमा बिभिन्न किसिमका विज्ञापनहरूले भरिएका छन्। यदि तपाइँको चिह्न पढ्न योग्य छैन भने, यो सुरक्षित छ कि उनीहरूले ढिलो गर्दै छैनन् र यो पत्ता लगाउन को लागी हेर्नुहोस् कि तपाइँले के प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईको चिन्हले तपाई को हो र तपाई स्पष्ट र संक्षिप्त तरिकाले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछ। तपाईंको हस्ताक्षर (हरू) समीक्षा गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको व्यवसायको बारेमा मात्र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश गर्दछ र अनावश्यक सन्देशहरू वा ग्राफिक्सको साथ अव्यवस्थित छैन, र पृष्ठभूमि र अक्षर पढ्न सजिलो छ।